राष्ट्रिय गान: ड्रुक सेन्धेन
सङ्घीय संसदीय संवैधानिक राजतन्त्र
• वाङ्चुक काल
सन् १९०७ डिसेम्बर ७
• संवैधानिक राजतन्त्र
३८,३९४ किमी२ (१४,८२४ वर्ग माइल) (१३५औ)
• २००५a जनगणना
१८.० /किमी2 (४६.६ /वर्ग माइल) (१९६औ)
न्यून · १४०औ
अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय+६ (भुटानको प्रमाणिक समय)
अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय+६ (अधुरो)
भुटान दक्षिण एसियामा अवस्थित एउटा सानो देश हो। यसको सीमा दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारत र उत्तरतर्फ गणतन्त्र चीनको तिब्बतसँग जोडिएको छ। भुटानलाई भारतको सिक्किम राज्यले नेपालसँग छुट्याएको छ। भुटानीहरूले भुटानलाई स्थानीय नाम འབྲུག་ཡུལ། ड्रुग युल अर्थात ड्रयागनको देश भन्छन्। यो देश मुख्यतः पहाडी छ र दक्षिणी भागमा थोरै समतल भूमि छ। भुटान सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा तिब्बत र नेपालसँग जोडिएको छ। सन् १६४४ मा वर्तमान राजाका पुर्खा शब्ड्रुङ ङगवाङ नामग्यालले भुटानको स्थापना गरेका थिए। भुटानको आधिकारिक भाषा जोङ्खा हो तर यहाँ अरू पनि धेरै भाषाहरू बोलिन्छन्। भुटानमा नेपाली भाषीहरूको पनि बाहुल्यता रहेको छ, त्यसैले यहाँ जोङ्खाका साथै नेपाली भाषा पनि व्यापक रूपमा बोलिन्छ।
१७ औ शताब्दीको अन्तमा भुटानले बौद्ध धर्मलाई अङ्गीकार गर्यो। सन् १८६५ मा ब्रिटेन र भुटान बीच सिनचुलु सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, जसमा भुटानले सीमावर्ती केही भूभागको बदलामा केही वार्षिक अनुदानको लागि करार गर्यो। ब्रिटिश प्रभावमै १९०७ मा त्यहाँ राजतन्त्रको स्थापना भयो। तीन वर्ष पछि एउटा अझै समझौता भयो, जस अनुसार ब्रिटिश यस कुरामा राजी भए कि उनी भुटानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन तर भुटानको विदेश नीति इङ्ल्यान्ड द्वारा तय गरिन्छ। पछि सन् १९४७ उपरान्त यही भूमिका भारतले पायो। दुई साल पछि सन् १९४९ मा भारत भुटान समझौता अनुसार भारतले भुटानको त्यो सबै जमीन उसलाई फर्काई दियो जुन अङ्ग्रेजहरूको अधीन थियो। यस समझौता अनुसार भारतको भुटानको विदेश नीति एवं रक्षा नीतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका दिइयो।
भुटानका राष्ट्रप्रमुख राजा हुन र उनलाई स्थानीय भाषामा द्रुक ग्यालपो भनिन्छ। यहाँ सन् २००६ देखि जिग्मे सिङगे वाङचुकका छोरा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुक राजा(द्रुक ग्यालपो)का रूपमा राज्य गरिरहेका छन्। यो पद पुस्तनि नै हो तर भुटानको संसद शोगडूले दुई तिहाई बहुमतद्वारा हटाउन वा परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान छ। शोगडूमा १५४ सीट हुन्छन्, जसमा १०५ स्थानीय प्रतिनिधि, १२ धार्मिक प्रतिनिधि र ३७ राजाले छानेका प्रतिनिधि रहन्छन्. ती सबैको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ। राजाले नै मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरूको छनौट गर्छन र तिनिहरूको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ। भुटानमा संविधान जारी भएको मिति जुलाई १८, २००८ हो। यस अनुसार कार्यकारी अंगमा राज्य प्रमुखमा राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुक (डेसम्बर १४, २००६ देखि, नोबेम्बर ६ २००८ मा राज्यभिषेक), सरकार प्रमुख: प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्ले (अप्रिल ९, २००८ देखि), मन्त्रिपरिषद: ल्येन्गे सुन्छोग – राजाबाट मनोनित एवं राष्ट्रिय सभाबाट अनिमोदित र पाँच वर्षे अवधिका लागि काम गर्ने छन्। यहाँ पहिलो चुनाव मार्च २००८ मा सम्पन्न भएको हो।
व्यवस्थापकीय अंगमा दुई सदनात्मक ब्यबस्था छ। माथिल्लो सदन राष्ट्रिय परिषद गैर राजनीतिक (२५ सदस्यीय – २० जिल्लाबाट एक-एक जना गरी २० जना र ५ जना राजाबाट मनोनित), चार वर्षे अवधि; तल्लो सदन राष्ट्रिय सभा (४७ सदसीय, पाँच वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित) हुने गर्छन। पछिल्लो पटक राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन डेसम्बर ३१, २००७ र जनवरी २९, २००८ मा सम्पन्न भएको हो भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मार्च २४, २००८ मा सम्पन्न भएको थियो।।
भुटानलाई तलका बीस जिल्ला (जोङखाग) मा बाडिएको छः
भुटानमा हिमालयको अग्लो पर्वतमालाले घेरियेको ग्लेशियर
विश्वको सबैभन्दा सानो अर्थव्यवस्थाहरू माझ एक भुटानको आर्थिक ढाँचा मुख्य रूपमा कृषि र वन क्षेत्रहरू र त्यहाँ निर्मित जलविद्युतलाई भारतको विक्रयमा निर्भर छ। यस्तो मानिन्छ कि यही तीन वस्तुबाट भुटानको सरकारले ७५% कमाई गर्दछ। कृषि जुन यहाँको मानिसहरूको आधार हो त्यसमा ९०% भन्दा बढि मानिसहरू निर्भर छन्। औद्योगिक उत्पादन लगभग नगण्य मात्रामा रहेको छ नाम मात्रको उद्योगहरू कुटीर उद्योगको श्रेणीमा पर्छ। भुटानमा जलविद्युत र पर्यटनको क्षेत्रमा असीमित सम्भावनाहरू छन्।
भुटानको जनसङ्ख्या करिब ६ लाख ७२ हजार छ। भुटानको लगभग आधा मानिसहरू भुटानको आदीवासी हुन, जसलाई गांलोप भनिन्छ र तिब्बतको केही जातीहरूसँग यीनीहरूको निकटको सम्बन्ध छ। यस वाहेक अन्य जातीहरूमा नेपाली छन् र यिनीहरूको सम्बन्ध नेपालसँग छ। त्यस वाहेक शरछोगपा र ल्होछामपा जातीहरू छन्। यहाँको आधिकारिक भाषा जोङ्खा हो, यीनीहरूको साथसाथै यहाँ थुप्रै अन्य भाषाहरू बोलिन्छ, जसमा केही त बिलिन हुने अबस्थामा छन्। भुटानमा आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्मको महायान शाखा छ, जसको अनुसरण देशको लगभग तीन चौथाई जनताले गर्दछन। भुटानको २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या हिन्दू धर्मको अनुयायी छन्। भुटानको हिन्दू धर्मी नेपाली मूलका मानिसहरू हुन्, जसलाई ल्होछामपा पनि भनिन्छ। करिव एक लाख ल्होछामपालाई सन् १९८९ मा देशबाट निकालिएको (भुटानी सरकारका अनुसार कतिपय स्वेच्छाले) थियो। पूर्वी नेपालमा एक लाख जनता र भारतमा ३० हजार जति शरणार्थीका रूपमा बसिरहेका छन्। उनिहरूले शरणार्थी सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त र नेपाल सरकारबाट केही राहत र सहयोग् पाउछन्। भुटानी शरणार्थीको पुनर्वास कार्यक्रम अर्न्तर्गत हालसम्म ४० हजार शरणार्थी पुनर्वासका लागि विदेश प्रस्थान गरिसकेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालसम्म ३४ हजार १२९ शरणार्थीलाई पुनर्वासमा लिइसकेको छ ।
भुटान विश्वको ती केही देशहरूमा पर्दछ, जसले आफुलाई शेष विश्वबाट अलग राख्दै आईरहेको छ र आज पनि केही हदसम्म यहाँ विदेशीहरूको प्रवेश नियन्त्रित छ। देशको धेरै जसो मानिसहरू साना ग्रामिण क्षेत्रमा बस्छन र उनीहरू कृषिमा निर्भर छन्। बिस्तारै-बिस्तारै शहरीकरणले देशमा गती लिइरहेको छ। बौद्ध विचार यहाँको जीवनको महत्त्वपूर्ण भाग हो। तीर धनुष खेल यहाँको राष्ट्रिय खेल हो।
↑ "Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G" (PDF), United Nations, २००९, २२ नोभेम्बर २००९-को मूल रूप सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ५ अक्टोबर २००९। |deadurl= प्यारामिटर ग्रहण गरेन (सहायता)
भुटानका जिल्ला (जोङ्खाग)हरू
भूमथाङ्ग • चुखा • दगाना • गासा • हा • लूंतसे • मोङ्गर • पारो • पेमागात्सेल • पुनाखा • सामद्रूप जोङ्खार • साम्त्से • सारपाङ्ग • थिम्फू जिल्ला • त्राशीगाङ्ग • त्राशी यांग्त्से • त्रोंगसा • शिराङ्ग • वाङ्गद्यू फोद्राङ्ग • जेमेग •
विकिमिडिया कमन्समा भुटान सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=भुटान&oldid=1037184" बाट अनुप्रेषित
नेपालीभाषा पनि बोलीनेदेशहरू
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०८:०६, २१ सेप्टेम्बर २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।